Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada S.Ogaadeeniya ee Nairobi oo shirweyne aan caadi ahayn ku qabtay Grand Royal Hotel.
Jaaliyada S.Ogaadeeniya ee Nairobi oo shirweyne aan caadi ahayn ku qabtay Grand Royal Hotel.
Posted by ONA Admin	/ February 2, 2013
Jaaliyada S.Ogaadeeniya ee Nairobi ayaa maanta ku qabtay shirweyne ay isugu yimaadeen boqolaal dadwaynaha soomaaliyeed iyo taageerayaash halganka xornimadoonka ee Ogaadeeniya ka socodka kaas oo ka dhacay Hotelka Grand Royal ee xaafada Islii.
Shirwaynaha ay qabtay Jaaliyada Ogaadeeniya ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ka qayeb galay oo khudbado ka soo jeediyey mas’uuliyiinta Jaaliyada iyo waliba mas’uuliyiin Jabhada Waddaniga Xoreynta Ogaadeeniya, waxayna dhamaan khudbadaha mas’uuliyiintu salka ku hayeen isbadalka wakhtiga iyo marxaladihii uu Halganka Ogaadeeniya soo marey.
Dadweyanihii Soomaaliyeed ee shirwaynaha maanta Nairobi ka dhacay ka qayeb galay ayaa aad oogu dhag raariciyey xog-waran ay siiyeen mas’uuliyiintii Jabhada ONLF ee Shirka ka qayeb gashay taas oo salka ku haysay dhismaha maamul ku sheeg ka jira magaalada Jigjiga iyo waliba wajiyada ay isticmaalaan Gumaysiga Itoobiya iyo kuwa ushaqeeya.
Waxaa shirka lagu soo bandhigay filimo Muujinaya aqoon darida kuwa guumasiga la shaqeeya iyo waliba qiimo darida qaar kamid aha hadalada ay ku hadalaan waxaan shirka lagu daawaday qaar kamida ah hadalo uu ka yidhi cabdilaahi Itoobiya shir dad yar joogeen oo safaarada wayaanaha ee Nairbi ka dhacay hadalayey ayuu u qaatay in uu lahadalayo maxaabiistii Jeelasha Ogaadeeniya.
Shirka oo ay goob joog ka ahaayeen wariyeyaal Soomaaliyeed oo u shaqeeya Shabakadaha iyo TV-yo ayaa aad loogu canaantay saxaafada Somaalida oo lagu sheegay in ay buun buuniyaan beenta Gumaysiga ayna iska dhago tiraan xaqiiqada ka jira Ogaadeeniya.